Xisbiga Waddani baa yaqaan ictiraafka dowga loo maro by Abdi Mustaf - somalilandlivemedia
14:07 9. April 2017
Beesha reer Europe waxay weftigii Waddani u soo dhaweeyeen si qiimo badan. Waxay tegeen UK, Sweden, Norway & Finland. intaas oo dal gebihaan ba waxay ku qaabileen Waddani gacma furan. Taasi waxay muujinaysaa in xisbiga Waddani yaqaan dowga loo maro ictiraafka iyo beesha caalamka sida loola hadlo. Inshaallaa haday Kursiga ku guuleystaan siday ictiraaf uugu keenayaan Somaliland way u sahlantay sabab tuna tahay waxa hogaaminaya madax diploomaaci yiin ah oo kuna soo shaqeeyay.
Musharaxa madaxweyne ee Waddani iyo ku xigeen kiisuba waxay ku xeel dheer yiin kuna soo shaqeeyeen Diplomacy. Weligood shilin aan siyaasad ka soo gelin jeebka may gashan. Waxa kaloo wehiliya Xirsi Xaaji Cali oo isna khibrad dheer u le sida caalamka iyo dowladaha loola dhaqmo oo 5 sanadood wasiirka madaxtooyada ahaa. Waxa isna ruug cadaa sharciga golaha wakiilada iyo shuruucda caalamka ba cabay Abdil qaadir Jirde. Runtu waxay tahay in mid wal oo ka mid ihiba garanayo dhanka ictiraafku Somaliland ka xigo iyo sida loo soo dhiraan-dhirin karo. Waxa kaloo xisbiga Waddani ka tirsan rag iyo dumar aad u fara badan oo xisbiga hareeraha haya oo siyaasada ku xeel dheer oo waxa ka mid ah Ismail Buubaa iyo Cali Sanyare iyo qaar kaloo badan. Isku soo xoori oo xisbiga Waddani ku qaadan mayso mudo dheer in Somaliland la ictiraafo oo waxay garanayaan dowga loo maro iyo dhanka ictiraafku ka xigo iyo sida loola dhaqmo aduunka iyo beesha caalamka.
Daawo : Dawlada Somaliland Oo Balan Ku Qaaday inay soo celinayso Dhamaan Hantida Danta Guud Ee sida sharci darada ah loo Wareejiyay wakhti shacabku is Waydiinayaan Ma celin doona Muuse Biixi Hatida uu shacabka ka Haysto
ciidama Argagaxisada ah Ee Somalia .Al Shabaab oo Weerartey Xerada Daynuunaay
Siyaasi Cabdikariin Axmed Mooge Oo Dhaliiley Xukuumadda KULMIYE Iyo Masuuliyiinta Uu Farta Ku Fiiqay Video
Newer PostFariin Caafimaad Oo Mihiima Kuna Sahabsan Shuban Biyoodka Ka Dilaacay Dhulka Soomaalida Ayaa Waxa Inoo Diyaariyey Dr.Ahmed Suldaan Saleebaan.
Older Post KALA DOORASHADAYDII XISBIYADDA QARRANKA